musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Nyanzvi dzepamusoro dzeshuga uye AI kambani inonanga kuGuam
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Zimbabwe Breaking News • Health News • Hospitality Industry • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Vatungamiriri vezvehutano veGuam vanobatana nemauto nehunyanzvi hweshuga hwehunyanzvi hwekurapa kuitisa tsvagiridzo yeArtificial Intelligence-inotungamirwa kuGuam.
Chidzidzo chakarongwa chichatarisa kuunganidza dhata rezvehutano kubva kwakasiyana masosi uye kushandisa AI kuona zvakakomba njodzi uye nekupa ruzivo rwekurapa varwere vane chirwere cheshuga.
AI Hutano inoshanda mukushandisa AI neIoT kupa mhinduro dziri nyore dzehutano dzinoshanda munyika chaiyo nhasi, mumutengo unodhura, unoteerera zvakavanzika.
Kutungamira chidzidzo ichi kuchave vamwe vezvekurapa vepamusoro pashuga, hutano uye tekinoroji - kunyanya kutenderedza huchenjeri hwekugadzira uye tekinoroji inopfeka.
Guam Regional Medical Center (GRMC), American Medical Center (AMC), naCalvo's SelectCare vazivisa nhasi kuti vabatana neAI Health kutanga musangano wekutsvagisa hunyanzvi hwekutsvagisa hwekurapa kuchitsuwa cheGuam. Chidzidzo chakarongwa chichatarisa kuunganidza dhata rezvehutano kubva kwakasiyana masosi uye kushandisa AI kuona zvakakomba njodzi uye nekupa ruzivo rwekurapa varwere vane chirwere cheshuga.
Kutungamira chidzidzo ichi kuchave vamwe vezvekurapa vepamusoro pashuga, hutano uye tekinoroji - kunyanya kutenderedza huchenjeri hwekugadzira uye tekinoroji inopfeka. Iyo AI Hutano Advisory Board inosanganisira David C. Klonoff, MD (piyona muDiabetes Technology); naFrancisco J. Pasquel, MD (nyanzvi mukugadzirisa kuchengetedza neDiabetes Technology).
Chirwere cheshuga chinoramba chiri dambudziko guru rehutano hweveruzhinji izvo zvinokanganisa zvisingaite vanhu veAsia, Native Hawaiian, uye Pacific Islander chizvarwa. Zvinoenderana neazvino dhata kubva kuCDC kuwanda kwechirwere cheshuga kuGuam kwakakwirira kupfuura munzvimbo zhinji dzeUS, uye pakati pevakuru veChamorro nhaka iri 18.9% - ingangoita imwechete muzvitanhatu.
Guam inzvimbo yakanaka yekudzidza chirwere cheshuga uchishandisa AI. "Guam yakanyatsogadzwa kuti igadzire zvine chekuita nekudzidza pasi rose, uye zvakanyanya kukosha, zvinotibvumidza isu kusiya nhaka yakanaka yekukanganisa munharaunda kune avo vanotambura nechirwere cheshuga," akadaro Dr. Klonoff. “Guam haingotipe chete muenzaniso wakakura wekudzidza kwedu, asi inotipawo kusiyanisa kwemarudzi, kuvapo kwezvirwere zvisingaperi, pamwe nenzvimbo yepamusoro yezvokurapa. Chitsuwa ichi zvakare chidiki zvakakwana kuti tikwanise kuitisa chidzidzo chinodzorwa uye chinobudirira, kwatinokwanisa kuendesa zvakananga kune vazhinji vevane chekuita nehutano hwezvakatipoteredza. "
Nekubatana nezvipatara, vanopa inishuwarenzi, vanopa rubatsiro rwekutanga, varwere, uye marabhoritari Guam, teknolojia kambani AI Hutano inotarisa kuunza pamwechete ruzivo rwakatsoropodza kubva kune zvese izvi sosi mune yayo yekunyepedzera njere chikuva. Paunenge waunganidzwa, timu inoshandisa nzira dzinoverengeka dzeAI kudzikamisa varwere, kufanotaura kufambira mberi kwechirwere, uye kuwana mikana yakasarudzika yekupindira kwekutanga kugadzirisa zviitiko zvevarwere.
Guam Regional Medical Center ichashanda seye Yemukati Yekuongorora Bhodhi yeChidzidzo. "GRMC inofara kupa kune ino inonakidza yekudyidzana kudyidzana iyo isu tinovimba inogona kuunza mambakwedza enhambo nyowani mukuchengetwa kwevanhu vanorarama nechirwere cheshuga, kwete kuGuam chete asi nepasirese pasirese," akadaro GRMC Chief Medical Officer Dr. Alexander Wielaard.